Daraasad Gaar ah – Guulo wax-ku-ool ah oo Golaha degmada Qardho gaarey muddooyinkii ugu dambeeyey
Qardho waxay ahayd degmo ka tirsan gobbolkii hore ee Bar, inta aaney noqon magaalo-madaxda gobbolka Karkaar oo ah ka 7aad ee mandiqadda punland. Waxay xuduud la leedahay gobbollada Bari, sanaag-bari, Sool iyo Nugaal. Golaha Degmada Qardho waxa la dhisay 2005tii, xilligiisuna ahaa muddo afar sano ah. Wuxu noqday golaha degmo oo keliya oo ka gudbey caqabado fara badan oo kuwii dhiggiisa ahaa la degey. Muddadii Astaynta Tiirarka Nabadda la samaynayey waxa fiiro gaar la siiyey in wax looga ogaado guulaha degmadu gaartey loona barbar dhigo 14kii degmo oo kale ee sahaminta lagu soo maray.
Waxa u gaar ah:
• Afartii sano oo goluhu jirey wax is-qabqabsi ahi kama dhicin.
• Xulashada Xubnaha Golaha oo si siman loo qaybsaday.
• Gunta ayaa laga soo bilaabay habka xulashada Golaha Degmada.
• Dhammaan xubnaha golaha ee la soo xushay waxay buuxuyeen shuruudihii sharcigu tilmaamayey.
• Guddigii Fulinta loo doortay waxay muujiyeen “Hufnaan” xagga dakhliga iyo Kharashka. Waxalagu dhaqmay xeerarka maamulka lacagta u degsan.
• Bulshada oo si xoog leh uga qayb-qaadatay hawlaha golaha: xiriirka wanaagsan oo ka dhexeeya bulshada iyo Golaha ayaa raad weeyn ku yeeshay guulaha goluhu gaarey. Goluhu wuxu abaabulay dhawr kulan guud oo bulshada qaybeheeda kala duwani ka qayb-qaateen.
Sidaas awgeed, xaaldda Qardho aad ayeey uga duwanayd inta badan golayaashii ala asaasay oo ku guul-darraystay in ay kasbadaan kalsoonida bulshadooda canshuurahana bixiyaan. Golayaasha badankood waxay si xun u maamuleen deyntii iyo deeqihihii dawdda dhexe u fidisay, halka degmada Qardho ay si fiican u istimaashay ugana faaiidaysatey. Taasi waxay Qardho u soo hooydey in dhawr jeer oo weliba korosiimo leh loo fidiyey deyn iyo deeq.
Guulahaas ay Qardho gaartey, waxay PDRC ku dhiiri gelisey in ay ku qabato shirkii wada-tashiga oo lagu martiqaaday ilaa 34 xubnood oo ay ka mis ahaayeen wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dawladaha Hoose, Agaasimaha Dawladaha Hoose ee isla wasaaradda, saraakiil ka socdey wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Qoyska, Xildhibaanno Golayaasha Degmooyinka, Wakiilllada Bulshada Rayadka ah oo ay ku jiraan Haweenka, Dhallinyarada iyo dadka laga tiro badan yahay, kuwaas ka kala socdey dhammaan gobbollada Puntland. Taasi waxa looga dan lahaa in xubnaha golayaasha kale ka dheehdaan waxyaabaha Qadho u soo hoyey guulaha ay gaartey. Shirkaas wada-Tashi ka dib waxay ka qaybgalayaashu isla qireen in ay Qardho guulahan ku gaartey:
• Bulshada ku dhaqan oo ilaa xad hal jiffi ah – marka loo barbar dhigo magaalo madaxyada kale ee gobollada oo busho kal hayb ahi kuwa nool yihiin. Habkii xulashada ayeey arrintaasi u fududaysay.
• Gobbolka”Karkaar” oo Cusbaa – Qardhona magaalo Madax u noqotay: bulshada oo dhan, gaar ahaan odayaasha, oo aad ugu dadaaley in ay lugaha u taagaan maamul shaqaynaya si ay ugu muujiyaan bulshada iyo maamulkaba kalsooni ay isku hallayn karaan.